China S820 kabini icala neeleyibheli ukwenziwa kunye mveliso | I-S-conning
S820 kabini icala ileyibheli
Isikrini sokuthinta esenziwe ngabantu: Ukusebenza ngokulula nangokuthe ngqo, imisebenzi egqibeleleyo kunye nemisebenzi yokuncedisa kwi-Intanethi.
Ikhonkco kabini ngesixhobo sokulinganisa ukuqinisekisa ukungathathi hlangothi kweebhotile ezicaba kunye nezikwere.
Isixhobo esikhethekileyo sebhanti ye-jacking ibhande lilukhuni kunye nebhanti ephambili yokuhambisa ukuze kuqinisekiswe uzinzo nkqo ngokucinezela umzimba webhotile kunye nokuhambisa.
I-S820 iphambi nasemva kokulebhelisha izikhongozeli ezime okweqanda okanye eziziingxande kwimichiza yemihla ngemihla, ukutya kunye nesiselo, amayeza okuxuba kunye namanye amashishini. Ukuqinisekisa ukufakwa kweebhotile ngokuhambelana kwindawo engaphambili; Isixhobo esikhethekileyo sokuhlengahlengisa ibhanti ephezulu, ukuze ukubuyisela ubukhulu beebhotile ezahlukeneyo kube lula kwaye kube lula kokubini Ukuma -kunye kunye nokusebenza kwe-Intanethi, ukongeza indlela yokhetho, ukulebhelisha kwiibhotile ezijikelezileyo kunye neebhotile ezicaba kuya kwenziwa ngomatshini omnye.
Isikrini sokuthinta esenziwe ngabantu: Ukusebenza ngokulula nangokuthe ngqo, imisebenzi egqibeleleyo kunye nemisebenzi etyebileyo yokunceda kwi-Intanethi.
• Ikhonkco kabini ngesixhobo sokulinganisa ukuqinisekisa ukungathathi cala kweebhotile ezicaba kunye nezikwere.
• Isixhobo esikhethekileyo sebhanti ye-jacking ibhande lilukhuni kunye nebhanti ephambili yokuhambisa ukuze kuqinisekiswe uzinzo nkqo ngokucinezela umzimba webhotile kunye nokuhambisa.
• Ukukhetha ukujonga ileyibheli ebonakalayo yombane ukuphucula ukubonakala kokuchaneka.
Umsebenzi welebheli wokugcina iparameter (ungagcina kwangaphambili amaqela angama-50 eparameter yelebheli), akukho sidingo sokusetha kwakhona xa utshintsha ibhotile.
• Inokuxhotyiswa ngezixhobo ezinjengokuncamathela kwekhoyili kunye nokubekwa endaweni ukuze kufezekiswe iimfuno ezingaphezulu zokulebhelisha imilo yebhotile (kubandakanya ukubambelela kwekhoyili).
• Nikezela ngemisebenzi eyahlukeneyo yokuchonga, enjengokuchongwa kwelebheli, ukufunyanwa kwekhowudi yokuvuza kunye nokuprinta ukufunyanwa komxholo; Iibhotile ezingekho mgangathweni ziya kususwa ukuze zisetyenziswe kwakhona.
• inokuxhotyiswa ngomatshini oshushu wokunyathela, umshicileli wokuhambisa ubushushu okanye umshicileli we-inkjet wokuchwetheza ikhowudi kunye neelebheli.
Umsebenzi wolawulo lweelebheli ezikrelekrele, isilumkiso somsebenzi okhawulezayo, inkqubo yokufumana umfanekiso, njl.
S / Hayi. Umba Iparameters Phawula
1 Isantya Ibhotile yeflethi≦ Iibhotile ezingama-200 / umzuzu Inxulumene nobungakanani beBhotile, ubungakanani belebheli kunye nesantya sokondla
2 Ubungakanani beBhotile Ibhotile yeflethiUbukhulu: 20-90mm; Ukuphakama ≦ 300mm
3 Ukuchonga iileyibhile ± 1.5mm Ayibandakanyi impazamo yokuncamathisela kunye nelebheli
4 Misa ukurekhodwa kwelebheli ± 0.3mm
5 Isantya sokuhambisa 5～40meters / ngomzuzu
6 Isantya selebheli yokuthumela ngaphandle 3～50meters / ngomzuzu
7 Ububanzi ibhande swa 91mm
8 Uluhlu lwelebheli ububanzi obungaphakathi：76mm, ubukhulu obungaphandle:350mm
9 Amandla I-220V ± 5% 50 / 60Hz 1KW
10 Isikhokelo uqinile → ngasekhohlo okanye ngasekhohlo → ngasekunene (Chonga ulwalathiso lwakho xa ufaka iodolo) "Isikhokelo" sibhekisa kwicala lokuhamba kwento xa umsebenzi ejongene nokusebenza
11 Ubungakanani boMatshini obungaphandle (mm) Malunga (L)I-3000mm × (W)1650mm × (H) 1500mm Isalathiso kuphela. Nceda uqinisekise ubungakanani besicwangciso sokugqibela
Egqithileyo I-S400 yesantya esiphezulu sendibano kunye nenkqubo yokuphawula
Okulandelayo: I-S-Conning Isantya esiphakamileyo esilahlayo seSirinji yeNdibano kunye noMatshini wokuPhawula ukugcwalisa iNkqubo yeSirinji
Amacandelo amabini aMatshini wokuPhawula
Umatshini wokulebhelisha osezantsi kwilipstick
Phezulu kunye nasezantsi kwelebheli, Indibano yesirinji kunye neNkqubo yokuPhawula, Umatshini wokuTywina wePlastiki, Umatshini wokufaka iilebheli kwiibhokisi, Umatshini wokuPhawula iBhotile yoRhwebo, Umshicileli weLayibhile yeeBhotile zeJar,